Rakhiis OEM sheet biraha goynta biraha biraha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Ouzhan
Geedi socodka biraha xaashida waxaa ku jira goynta leysarka, oo inta badan adeegsada laser-waxtar sare si loo xardho loona jaro qalabka.
OEM sheet biraha goynta biraha biraha - sax sax sheet bir biraha goynta qaybo mashiinada
Waxyaabaha birta xaashidu waxay leeyihiin astaamaha miisaanka khafiifka ah, xoogga sare, habsami u socodka korantada, qiime jaban, iyo wax soo saar tiro badan oo wanaagsan. Waxay leeyihiin adeegsiyo ballaaran. Farsamaynta ayaa si ballaaran loogu adeegsaday qalabka elektarooniga ah, isgaarsiinta, warshadaha baabuurta, qalabka caafimaadka iyo dhinacyada kale. Tusaale ahaan, kiisaska kumbuyuutarka, taleefannada gacanta, iyo MP3, biraha birku waa qayb aan lagama maarmaan ahayn. Intaas waxaa sii dheer, waxaa loo isticmaalaa soo saarida aaladaha caafimaadka, iyo sidoo kale meydadka gawaarida iyo xamuulka (xamuulka), fuselageska diyaaradaha iyo baalasha, miisaska caafimaadka, saqafka dhismaha (dhismaha) iyo codsiyo kale oo badan.
Hore: Tayo sare leh OEM sheet cut laser biraha biraha
Xiga: Qaybaha birta ah ee xaashida ah